कसरी भाग्छन् सहकारी ? - जिस्ट खबर अर्थात यथार्थ खबर
कसरी भाग्छन् सहकारी ?
सहकारी संस्थाहरुको साधारण सभा धमाधम समय सुरु भएको छ । यो समयमा संस्थाले वार्षिक कति आम्दानी ग¥यो भन्ने सेयर सदस्यहरुलाई चासो हुन्छ । हरेक सहकारीले साधारण सभाबाट वार्षिकरुपमा भएको नाफा नोक्सानको अवस्था प्रस्तुत गर्छन् । साधारण सभा कुरेका सेयर सदस्य त्यतिबेला पीडामा पछ्र्रन् जतिबेला सहकारी भागेको भन्ने समाचार सुन्नमा आउँछन् । सहकारी संस्थाहरु भागेको भन्ने समाचारहरु आईरहँदा सहकारीहरु किन भाग्छन् भन्ने महत्वपूर्ण कुरा हो । सहकारी विभागका रजिष्ट्रार विष्णुहरि पौडेलका अनुसार सहकारीका विषयमा आवश्यक शिक्षाको अभावमा सहकारीमा समस्या आउने गरेको छ । उनी भन्छन्–‘सहकारी संस्था राम्ररी नबुझी संचालन गर्ने अनि संचालकहरु बढी महत्वाकांक्षी भएर पनि समस्या आएका छन् ।’ हुन त सहकारी स्वायत्त र स्वतन्त्र संस्था हो, तर स्पष्ट नीतिको अभावमा स्वायत्त र स्वतन्त्रताका नाममा सीमाबाहिर गएर कारोवार गर्ने संस्थाहरु पनि नभएका होईनन् ।
सहकारी संस्थाहरुको अवस्था
सहकारी विभागको २०७१ साल जेठ मसान्तसम्मको तथ्यांक हेर्ने हो सहकारी क्षेत्रबाटमात्रै एक खर्ब ६२ अर्बभन्दा धेरै संकलन भएको छ यो रकम देशभरमा दर्ता भएका ३० हजार दुई सय ५२ सहकारी संस्थाबाट संकलन भएको हो । ३० हजारभन्दा धेरै सहकारी संस्थामध्ये बचत तथा ऋण, बहुउद्देश्यीय, कृषि, दुग्ध, उपभोक्ता, विद्युत, तरकारी तथा फलपूmल, चिया, कफि, जडिबुटी, मौरीपालन, संचार, स्वास्थ्य, उखु, जुनार, अन्य कारोवार गर्ने संस्थाहरु रहेका छन् । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै बचत तथा ऋण सहकारी छन् ।
गत आर्थिक वर्षमा देशभरमा सात सय २६ सहकारी दर्ता भएका छन् भने खारेजीमा पनि निकै परेका छन् । गत आर्थिक वर्षमा राम्रो अवस्था मानिएको रुपन्देहीमा ९२ वटा सहकारी संस्था खारेजीमा परे । ललितपुरमामात्रै सात वटा सहकारी लिक्विडेसनमा परे भने ५७ वटा सहकारी खारेजीमा परे । गत वर्ष उजुरीका आधारमा एक सय ३५ सहकारी समस्याग्रस्त रहेको समाचार यसअघि नै प्रकाशित भैसकेका छन्, तर यो संख्या कम हुने सहकारी विभाग योजना शाखाका प्रमुख विष्णु प्रसाद घिमिरे बताउँछन् । उनी भन्छन्–‘तीन वर्षका लागि एकमुष्ट राखेको तर बीचैमा निकाल्न खोज्दा नदिएको रिसमा निवेदन दिने पनि यो संख्यामा परेका छन् ।’ गत आर्थिक वर्षमा पूर्वका ईलाममा ११, पाँचथरमा छ र ताप्लेजुङमा तीन सहकारी विगठन गरिए भने सुदुर पश्चिमको कैलालीमा ३० वटा सहकारी खारेजीमा परे । दर्तासँगै खारेजीमा पर्ने सहकारीको संख्या पनि कम छैन ।
कसरी गर्छन् कारोवार ?
सहकारी क्षेत्रको समस्या भनेको सहकारीहरुले आफ्नो कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर गएर पनि कारोवार गर्ने गर्छन् । बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुको झैं सजावट अनि त्यै अनुरुपको कारोवार सहकारीले गर्छन् । कतिपय अवस्थामा त एउटै भवनमा बसेका बैंक र सहकारीको कारोवारको तुलना गर्ने हो भने सहकारीकै बढी कारोवार हुने गरेको छ । सहकारी संस्थाका कर्मचारीहरु घरदैलोसम्म पुगेर रकम संकलन गरिरहेका कारणले पनि कारोवार वृद्धि त हुन्छ नै, तरपनि कारोवारको मुख्य आधार बैंकलाई नै बनाएका हुन्छन् । सहकारीले बैंकले झैं विभिन्न शिर्षकमा कर्जा उपलब्ध गराउँदै आएका छन्, यद्यपी ओडी शिर्षकमा समेत लगानी गर्दै आएका छन् । सहकारी संस्थाको समस्याका विषयमा डिभिजन सहकारी कार्यालय भक्तपुरका पूर्व डिभिजन प्रमुख हरि वाशिष्ट भन्छन्–‘धेरै समस्या छैनन् यो क्षेत्रमा, एउटा बुझेर पनि बुझ पचाउने । अर्को जान्दै नजान्ने, ऐन कानुनदेखि डराईडराई कारोवार गर्ने ।’ सहकारीमा लागेका सबै सहकारी नियमभन्दा बाहिर छन् भन्ने पनि होईन, तर ‘बुढी मरीभन्दा पनि काल पल्कियो’ भन्ने चाहिँ ठूलो समस्याको विषय हो । एउटा सहकारीका कारण सहकारी क्षेत्रमा नै ठूलो असर राख्छ । अझ कतिपय सहकारीको त नामसमेत मिल्न जान्छ, यस्तो अवस्थामा एउटा सहकारीमा आएको नराम्रो समाचारले अर्को सहकारीमा पैसा निकाल्नेको भीड नै लाग्न सक्छ ।
अस्पष्ट कानुन र संचालकका कमजोरी
सहकारी संस्था भनेको समान स्तर भएकाहरु नै मिलेर खोलेका हुन्छन् । सहकारीमा लागू गरिने ब्याजदर साधारण सभाबाट पारित गर्नुपर्छ तर प्रायः सहकारीले यो विषयलाई साधारण सभामा नै लैजान हिच्किचाउँछन् किनकी बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुको स्प्रेड दरको अनुपात ६ प्रतिशतमात्र छ । साधारण सभा पनि केहि सहकारीहरुले कार्यालयमैं बोलाएर माईन्यूट पुस्तिकामा हस्ताक्षर गराएर गर्ने गर्छन् भने कति सेयर सदस्य खोज्दै माईन्यूट बोकेर घरघरमा पुग्छन् । सहकारी संस्था पल्र्सको सिद्धान्त अनुसार पनि चल्नुपर्ने हुन्छ, तर सहकारीहरु पल्र्सको अनुपातमा काम गर्न सकिरहेका हुँदैनन् । डिल्लिबजारमा रहेको दूरदर्शन बचत तथा ऋण सहकारीले एक वर्षदेखि पल्र्सको सिद्धान्तमा काम गर्दै आएको छ, तर पनि पूर्णरुपमा यो लागू भैसकेको छैन । संस्थाका कार्यकारी अध्यक्ष प्रमोदचन्द्र अधिकारी भन्छन्–‘पल्र्सको सिद्धान्तमा रहेर काम गर्ने हो भने कुनै पनि सहकारी समस्यामा पर्दैन, हामीले यसलाई पालना गर्दै मासिक रिपोर्टसमेत निकाल्ने गरेका छौं ।’
संचालकहरुले कर्जा आफ्नो नाममा लिन नमिले पनि आफ्ना र आफन्तका नामबाट लिईरहेका हुन्छन्, जसकाकारण आफन्तबाट समयमैं कर्जा नउठ्न सक्छ । सहकारीमा विनाधितो ऋण दिईने हुँदा पनि त्यो समयमैं नउठ्ने सम्भावना हुन्छ, तर पनि सहकारी संचालकहरुले लगानी गरिरहेका हुन्छन् । विश्वासका आधारमा गरिने लगानीले पछि समस्या निम्तिएका छन् । छोटो समयको कर्जा धेरै दिईनु, ओडी शिर्षकमा लगानी गर्नु, कार्यक्षेत्रबाहिर लगानी गर्नु, साधारण सभामा प्रस्तुत गर्नु पर्ने एजेण्डा साधारण सभामा नै नलानु सहकारी संचालकका कमजोरीका रुपमा रहेका छन्, जसले सहकारीलाई नै अप्ठ्यारो पार्छ । साधारण सभा नगर्नेलाई दण्ड कम भएकाकारणले पनि सहकारीका संचालकमा मनोबल बढेको छ । साधारण सभामा लाग्ने खर्च गर्नुभन्दा १५ सय जरिवान तिर्नुमा फाईदा देखेर साधारण सभा नगर्ने, अडिट नै नगर्ने काम पनि केहि सहकारीकर्मीहरुले गर्दै आएका छन् । कार्यक्षेत्रबाहिरको कारोवार र नाफा केन्द्रीत व्यवसाय बनाउनका लागि सहकारी लागे पनि कानुनी आधारमा जरिवान गर्ने र दण्ड दिने स्पष्ट व्यवस्था नभएकाले पनि समस्या बढ्दो छ ।
के गर्छन् विषयगत संघहरु
दर्ता भएका सहकारीहरुमध्ये विभिन्न शिर्षकअन्तर्गत सहकारीहरु दर्ता भएका छन् । ती सहकारीहरुको छाता संगठनकारुपमा विषयगत केन्द्रीय संघ र जिल्ला संघहरु पनि रहेका छन् । देशभरमा विषयगत केन्द्रीय संघहरु १८, राष्ट्रिय सहकारी संघ, राष्ट्रिय सहकारी बैंक, जिल्ला संघहरु ६९, विषयगत जिल्ला संघहरु दुई सय ४१ रहेका छन् । तर यति धेरै विषयगत संघहरु भएता पनि तिनीहरुलाई एकत्रित गर्ने, सबै संस्थालाई समेटेर कारोवार गर्नेजस्ता कामहरु भने हुन नसकेको स्पष्ट छ । जिल्ला सहकारी संघ ललितपुरका अध्यक्ष माधव दुलालका अनुसार कुनै सहकारीमा समस्या आए सेयर सदस्यहरु संघमा आउँदैनन्, सिधै विभाग वा डिभिजन सहकारी कार्यालय पुग्छन् । उनी भन्छन्–‘हामी कहाँ सबै सहकारी आवद्ध पनि छैनन् । हामीले सहकारी शिक्षाका लागि तालिम दिईरहेका छौं ।’ ललितपुर जिल्लाका एक हजार ४८ सहकारीमध्ये संघमा जम्मा चार सय ५० संस्थामात्र आवद्ध छन् । काठमाडौंको अवस्था हेर्ने हो भने त्यो भन्दा पनि न्युन छ । विषयगत संघको काम के हो ? भन्नेबारेमा अन्यौल देखिएको छ ।
अनुगमनपछि सुधे्रलान् सहकारी ?
विशेषगरी ओरियण्टल, गुण सहकारीमा समस्या आएपछि अनुगमनलाई तीव्र पारेको सहकारी विभागले गत आर्थिक वर्षमा चार सय १८ सहकारीको अनुगमन ग¥यो । अनुगमनमा देखिएका कैफियतहरुलाई विभागले अहिले विभिन्न निकायहरुसँग बसेर छलफल गरिरहेको छ । सहकारी विभाग योजना शाखाका प्रमुख विष्णु प्रसाद घिमिरेको भनाई अनुसार समस्या संकलन गर्नु ठूलो कुरा होईन, यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ त्यो महत्वपूर्ण कुरा हो । उनी भन्छन्–‘समस्याको त जंगल छ हामीसँग, सहकारीहरुलाई सहिरुपमा कसरी लैजाने भन्नेमा सरकार, सहकारीका विभिन्न संघहरु र सम्बन्धित निकायको ध्यान जानु जरुरी छ ।’ विभागका अनुसार ओरेण्टल सहकारीलाई पनि २०६६ सालमा नै अनुगमन गरि सुधारका ३१ बुँदा उल्लेख गरि दिईएको थियो, तर उक्त सहकारीले त्यसलाई सुधार्नतिर नलाग्नुको परिणाम २०७० सालमा आएर सिंगो सहकारी क्षेत्रमा नै असर पर्ने गरि देखियो । अहिले पनि विभागले ३१ बुँदाकारुपमा सहकारीले तथ्यांक भर्नु पर्ने फारम बनाएको छ । विभागका अनुसार अनुगमन गरिएका सहकारीमा समस्याग्रस्त अवस्था नभएको बताएको छ, तर पनि नियमअनुसार नै चलेका सहकारी भने कमै देखिएका छन् । अनुगमनपछि एक संस्थामा एकमात्र संचालक रहने गरेको, लगानीको क्षेत्रमा पनि सुधार गरेको भनिएको छ । तर अनुगमन पनि अनुगमनका लागिमात्रै हुने गरेको गुनासो पनि नभएको होईन । कारोवारका आधारमा ठूला भनिएका सहकारीलाईमात्रै विभागले अनुगमन गरेको छ । नीतिगतरुपमा काम गर्न कठिनाई रहेका बेला विभागले अप्ठ्यारोमा पार्न लागेको केही सहकारीकर्मीले बताउँदै आएका छन् । एक सहकारीका कार्यकारी संचालक भन्छन्–‘विभागले कानुनी आधार खोज्ने हो भने सबै कहाँ नीतिसँगत नै चलेका छन् र ? यसका लागि सच्चिने समय दिनुपर्छ ।’ एक्कासी अनुगमन गर्ने र कारवाही गर्ने हो भने विभागमा भ्रष्टाचार बढ्नेतर्फ संकेत गर्दै उनले भने–‘त्यसो हुँदा कारवाहीमा परिने डरले सहकारीकर्मीहरुले विभागका अनुगमनकर्तालाई आर्थिक प्रलोभनमा पार्छन् अथवा विभागका अनुगमनकर्ताले नै ‘डिमाण्ड’ गर्छन् ।’
अनुदानको लोभमा पनि खुल्छन् सहकारी
बचत तथा ऋणपछि दर्ताका हिसाबले कृषि सहकारीको संख्या धेरै छ । देशभरमा कृषि सहकारीको संख्यामात्रै सात हजार पाँच सय दुई रहेको छ । तर कारोवारको अवस्था भने अत्यन्तै न्यून छ । कृषिमात्रै होईन, सरकारले सहकारीमार्फत स्वरोजगार कोषको रकम लगानी गर्ने हुँदा सहकारी दर्ता गरेर स्वरोजगार कोषको रकम पार्ने दाउमा संस्था दर्ता गर्ने गरेको पाईएको छ । डिभिजन सहकारी कार्यालय भक्तपुरका पूर्व डिभिजन प्रमुख हरि वाशिष्ट भन्छन्–‘अनुदानको खोजीमा दर्ता भएका सहकारीले अनुदानकै लागिमात्र काम गर्न सक्छन् । अहिले मुश्किलले २५ प्रतिशतलेमात्रै कृषिको काम गरेका होलान् ।’ यसबाट पनि के प्रष्ट हुन्छ भने सहकारी दर्ताका हिसाबले संख्या धेरै भए पनि सहकारीकै हीतका लागि संचालन भएका सहकारीको संख्या अझै कम छ । अनुदानका आशमा दर्ता गरिएका, आफन्तबीच कारोवार गर्न खोलिएका सहकारीका कारणले पनि समस्या बल्झिएका छन् । समयमा अडिट रिपोर्ट नबनाउने, साधारण सभा नगर्नेजस्ता गतिविधि यस्तैकारणबाट भईरहेका छन् ।
विभागको भूमिका अब कस्तो होला
गत आर्थिक वर्षमा चार सय १८ वटा सहकारीमा अनुगमन गरेको सहकारी विभागले यो वर्ष यसलाई अझ तीव्र पार्ने बताएको छ । विभागले आर्थिक वर्ष २०६९÷७० मा ४५ लाख ६८ हजार छ सय २७ रुपैयाँ दण्ड जरिवाना (गैह्र राजस्व) वापतमात्रै संकलन ग¥यो । यसबाट पनि के पुष्टि हुन्छ भने सहकारीमा जरिवाना तिर्ने संस्था अत्यन्त धेरै छ, जवकी सहकारीलाई १५ सयभन्दा बढी जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छैन । अहिले दुई तीन वर्षकै साधारण सभा एकैचोटी गर्न नपाउने व्यवस्था पनि विभागले गरेको छ । साधारण सभा नगर्ने, अडिट समयमै नगर्ने, मासिक रिपोर्ट नबुझाउने सहकारीलाई कैफियतमा पारिने विभागले बताएको छ । विभागले सहकारीको अनुगमन, मुल्यांकन गर्ने तथा व्यवस्थापनका लागि मन्त्रालयमा सबैको राय सुझाव संकलन गरि पठाउने बताएको छ ।
विश्वमा सहकारीको अवस्था
विश्वमा १० करोड मानिसलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको सहकारी क्षेत्रमा एक अर्ब मानिसहरु आवद्ध छन् । रोजगारीको यो संख्या विश्वमा रहेका बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुकोभन्दा २० प्रतिशतले बढी हो । सहकारीको प्रत्यक्ष लाभमा परेको महादेशमा युरोप अगाडि छ, जहाँ १४ करोडभन्दा ज्यादा मानिसहरु सहकारीमा आवद्ध छन् । महाशक्ति मानिने संयुक्त राज्य अमेरिकामा १० हजार कर्जा संघ, सात हजार आवास सहकारी, चार हजार कृषक सहकारी छन्, यस हिसाबले हेर्ने हो भने अमेरिका कुन कारण समृद्ध बन्यो स्पष्ट छ । प्रसिद्धिका हिसाबले हेर्ने हो भने पनि ब्राजिल कृषि सहकारी, अर्जेन्टिना कामदार सहकारी, मेक्सिको ऋण सहकारीकाकारण चर्चित छन् । सहकारीको विकासको तुलना गर्ने हो भने एसियामा जापान, कोरिया, चीन, भारत, मलेशिया उदाउँदो रुपमा छन् ।
क्र सं. मुलुक कृषि उत्पादन सहकारीको हिस्सा
१. स्विडेन दुग्ध पदार्थ ९९ प्रतिशत
२. जापान चामल/माछा ९५/६० प्रतिशत
३. क्यानडा तेलजन्य उत्पादन ७५ प्रतिशत
४. ईटाली वाईन (रक्सी) ६० प्रतिशत
स्रोत : jake karyle, Hobart conference, 2005